China Nordic Modern Solid Wood Living Room Two-Colour TV Stand Cabinet # 0020 Ukwakha kanye nefektri | Yamazonhome
Igumbi Lokuhlala Lama-Nordic Modern Solid Wood-Imibala Embili Ema-TV # 0020
Igama: Isitendi se-TV
Inombolo imodeli: Amac-0020
Usayizi: 1800 * 350 * 430mm
Izinkuni eziqinile ezinemibala emibili ikhabethe le-TV le-4
Igama: Itafula eliseceleni
Ikhabethe le-TV elilula futhi lesimanje eliqinile
Ekuboneni kokuqala, leli khabethe elimhlophe le-lacquered le-TV lilula futhi lihle. Ubuso obunamacwecwe obuhlanzekile buhambisana nezibambo ezine eziqinile zokhuni ezizungeze iso, okulula ukuzidonsa futhi ezingabangeli izigaxa zengozi. Imidwebo nemidwebo yemvelo kwideskithophu, imbiza yezitshalo ezinamanzi aluhlaza, ingeza amandla nobungqabavu kwikhabethe le-TV.
Imilenze yekhabethe leqinile eqinile futhi eyindilinga
Ngokusho komklamo wesayensi wekhabethe le-TV, imilenze yekhabethe ewugqinsi, i-angle yokuthambekela enengqondo, nemilenze yekhabhinethi eyindilinga ezansi yenza amandla wokuthwala abe namandla, aqine futhi azinze, anciphise indawo oxhumana nayo nomhlabathi, anciphise ukumelana nokungqubuzana, futhi enze kulula ukuthi unyakaze, ucindezele bese udonsa okuthi Linda. Nciphisa ukumelana, gwema umsindo onokhahlo, futhi wandise impilo yenkonzo yayo.
Idizayini yokubamba ikhabethe lezinkinobho
Umklamo wesibambo wesitayela futhi olula wenziwe ngokhuni oluqinile, oluqinile futhi oluqinile. Finyelela ngaphakathi bese ukhipha ngobumnene ikhabethe, ugcine isikhathi nomzamo. Isibambo senkinobho emnyama simataniswa ne-lacquer emhlophe elula nehlanzekile, egqamisa uhlobo oluhlukile lobuhle. Sanelisa ukuphishekela kwakho okuphezulu imfashini yefenisha.
Ukwakhiwa komzimba okuqinile
Ukwakheka komzimba okuqinile emuva kunganciphisa ngempumelelo ubungozi bezinto ekhabetheni elingasheleli kuwo, ngaleyo ndlela kubangele ingozi yokuwa. Umhlane ovaliwe ulula futhi ungokwemvelo, uyisicaba futhi ubushelelezi, futhi unganamathela kakhulu odongeni ukuvimbela izinto ukuthi zingawi.
Idizayini yesikhala sokugcina esiphezulu
Amadilowa amane amakhulu anomthamo ophakeme, ahlukaniswe ngobunono, angakusiza ukugcina ngokufanelekile izinto zezigaba ezahlukahlukene. Idizayini yamalayidi wokhuni oluqinile inyusa ukushelela okushelelayo phakathi kwamadilowa, futhi ayivezi umsindo njengamasilayidi wensimbi futhi kulula ukugqwala. Isitimela esiqinile sesilayidi sokhuni sinciphisa ukulimala kokushayisana kwezinkuni futhi sinweba impilo yenkonzo yekhabethe le-TV.
Ikhabethe le-oak elimhlophe lekhwalithi ephezulu
Yenziwe nge-oki emhlophe engeniswe ivela eNyakatho Melika, ukhuni oluqinile oluqinile alunamathelisiwe, futhi alukhuni ngokhuni lwenjoloba. Ikhwalithi yezinkuni isidlulile ekuhlolweni okuqinile kwekhwalithi, ngakho-ke ungaqiniseka. Izinhlamvu zezinkuni zicacile futhi ziyimvelo, okusanhlamvu okuhlelekile kuhlelwe ngendlela ethile, enhle futhi elula, ukuthungwa kuqinile futhi kuqinile, futhi isandla sizizwa sihle futhi sibushelelezi. Kuyinkuni enhle kakhulu yokwenza ifenisha esezingeni eliphakeme.
Langaphambilini Izinsiza zemidlalo yezamanzi ezintsha ze-SUP zango-2020 0364
Olandelayo: I-Nordic minimalist oki emhlophe yokhuni oluqinile ifulethi elincane i-TV Stand iKhabhinethi # 0021
Ifenisha Yokulala Yombhede Wokulala Entsha Eqinile Pine 0223
Nordic ukukhanya okunethezeka PU yokudlela esihlalweni izingxoxo ...
Nordic isitayela yefulaneli usihlalo stylish minimalist f ...
Amazon New Rabbit Yokuzalela Isitoreji Pet Ca Ca ...